ရွက်ဝါလေးများ .. လွင့်မျောချိန် | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
July 23, 2008, 9:11 am
နေရာဒေသတွေ ဘယ်လိုကွဲကွာခြားနားလည်း ယုံကြည်ချက်နဲ့ ပန်းတိုင်ကတော့ အတူတူဘဲ။ ရောက်တဲ့နေရာ၊ ကျတဲ့အခန်းကနေ အကောင်းဆုံး ဆက်လက် ပူးပေါင်းပါဝင်ကြစို့ရဲ့။
တွဲလက်များ ညီစေ။ ဒီမိုကရေစီအရေး မုချအောင်ရမယ်။
Comment by Ko Paw July 24, 2008 @ 6:03 pm
ညီမငယ် လင်းလက် …
ရင်ကို ထိရှပြီး ရဲရင့် ပြတ်သားတဲ့ စကားလုံးတွေအတွက် ကျေနပ်မိပါတယ် ….
ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးတွေ ကြုံတွေ့ပါစေ ကိုယ့်တိုင်းပြည်၊ ကိုယ့်လူမျိုး နဲ့ ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်အတွက် လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တာမှန်သမျှကို လုပ်ဆောင်နေရဦးမှာပါ …
အခြေအနေအရ အနေဝေးခဲ့ရရင်လည်း မှန်ကန် တည်ကြည်တဲ့ ရင်ထဲက သစ္စာကြောင့် စိတ်ချင်း အမြဲတမ်း နီးနေကြမှာပါ …
Comment by Lun Lunn July 24, 2008 @ 6:56 pm
Comment by Anonymous July 25, 2008 @ 7:49 pm
ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းစရာပဲ။ ညီမဆီကို မကြာခဏတော့ ရောက်ရောက်ဖြစ်နေတာပဲ။ ဘာမှသာ မရေးဖြစ်ဘဲ ပြန်ပြန်သွားနေမိတာ။ နေထိုင်ခွင့် သက်တမ်း တိုးမပေးတာက မြန်မာပြည်ရဲ့ မုန်တိုင်းကိစ္စမှာ လူကိုယ်တိုင် သွားကူကြလို့ လို့ သတင်းကြားရတယ်ညီမ။ အဲဒါကိုပါ သတင်းအချက်အလက် အသေးစိတ်ပုံစံမျိုး သိချင်သေးတယ်။
Comment by ကလိုစေးထူး July 26, 2008 @ 10:49 am
ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းစရာပါ။ စာသားတွေ အရမ်းထိတယ်။
Comment by ကောင်းကင်ကို July 31, 2008 @ 6:19 am
လုံးဝကို စိတ်မကောင်းစရာတွေပါပဲ။ ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသပဲရောက်ရောက် ခံယူချက်တွေ နဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေ ကတော့ ဘယ်တော့မှ ပြောင်းမသွားဘူးဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်။ အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေ။
Comment by ဗမာပြည်သား July 31, 2008 @ 6:49 am
88 နောက်ပိုင်းမှ လူဖြစ်လာတဲ့ ညီမလေးရဲ့ ကလောင်သွားကတော့ အင်မတန်မှ ထက်လှပါပေတယ်.. အသက်ငယ်သော်လည်း စာပေနယ်မှာ ၀ါရင့်လှပါပေတယ်..
Comment by အဇ္ဈတ္တပြခန်း August 1, 2008 @ 2:47 pm